ဟာသလေးများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » ဟာသလေးများ
Posted by Yin Nyine Nway on Jan 29, 2011 in News | 20 comments
လူတစ်ယောက်ဟာ ဆိုင်ကယ်စီးရင် လေတိုးသက်သာအောင်ဆိုပြီး အနွေးထည်ကို နောက်ပြန်ဝတ်တတ်သတဲ့။ တစ်နေ့တော့ အရက်မူးပြီး သူဆိုင်ကယ်မှောက်တယ်။ ဆိုင်ကယ်မှောက်တဲ့နေရာကို ရဲတွေရောက်လာတယ်။ ပထမရဲ ။။။။။ ဟာ…တော်တော်ဖြစ်သွားတာပဲ။ ဒုတိယရဲ ။။။။။ ဟုတ်တယ်။ ကြည့်စမ်း.. ခေါင်းတောင် နောက်ပြန်လည်သွားပြီ။ ပထမရဲ ။။။။။။ အသက်ရှုနေသေးတယ်။ ခေါင်းကို တည့်ပေးလိုက်ကြရအောင် ဒုတိယရဲ ။။။။။ လာ.. ၁..၂.. ၃…အင်း.. ခေါင်းတည့်သွားပြီ။ ပထမရဲ ။။။။။ အင်း.. အခုမှ အသက်မရှုတော့ဘူး
(၂) တစ်နေ့မှာ ခရီးသွားတစ်ယောက် ခရီးသွားရင်း လမ်းမှားခဲ့တယ်။ ခရီးသွားက လမ်းဘေးမှာ ဆော့ကစားနေတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ခေါင်းကိုကိုင်ပြီး လမ်းမေးတယ်။ “ဟေ့.. ချာတိတ် ဒီနေရာကို ဘယ်လိုခေါ်လဲ?” “ဒါ ကျွန်တော့်ခေါင်းလေဗျာ”
(၃) “လကမ္ဘာဆိုတာ အကြီးကြီးပဲ။ လူ သန်းပေါင်းအများကြီး နေနိုင်တယ်” ပထဝီဝင်ဆရာတစ်ဦးက ကလေးတွေကို ရှင်းပြတယ်။ အဲဒီမှာ ကလေးတစ်ယောက်က ထအော်တယ်။ “ဒီလိုဆို မလွယ်ဘူးဆရာ… လဆန်း၊ လကွယ်ရောက်ရင် လူတွေ ကျပ်ညှပ်ပြီး သေကုန်ကြလိမ့်မယ်”
(၄) လူတစ်ယောက် စားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ အစားသွားစားတယ်။ အစားစားနေချိန်မှာ မတော်တဆ ဇွန်းပြုတ်ကျသွားတယ်။ ဘေးမှာရပ်နေတဲ့ စားပွဲထိုးက ချက်ချင်းပဲ ဘောင်းဘီအိတ်ထဲကနေ ဇွန်းတစ်ချောင်းထုတ်ပေးတယ်။ ဒါကို သူကတအံ့တသြနဲ့ စားပွဲထိုးကို မေးတယ်။ “ဘာဖြစ်လို့ ဇွန်းကို ဘောင်းဘီအိတ်ထဲ ထည့်ထားရတာလဲ?” စားပွဲထိုး…. “ကျွန်တော်တို့အထက်က အကြံပေးလူကြီးတွေက ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်ကို ပိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ဆိုပြီး အပြောင်းအလဲ လုပ်လိုက်တယ်။ စားသုံးသူတွေ မတော်တဆ ဇွန်းပြုတ်ကျသွားရင် ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်ပေါ်ကနေ ချက်ချင်းထုတ်ပေးနိုင်အောင် စီစဉ်ထားတယ်။ ဒီလိုပြောင်းလဲလိုက်တာနဲ့ အလုပ်ရဲ့တိုးတက်နှုန်းက ၃၁% ရှိသွားပါတယ်။ ဒါဟာ မီးဖိုထဲထိ ဇွန်းသွားယူမယ့် အသွားအလာချိန်ကို သက်သာစေပါတယ်” “အင်း သိပ်ကောင်းတဲ့ အကြံပါပဲ” ဒီလိုနဲ့ စားသောက်ပြီးငွေရှင်းဖို့ ကောင်တာဆီ သူသွားလိုက်မယ်။ အဲဒီမှာ စားပွဲထိုးတွေရဲ့ ဘောင်းဘီဇစ်မှာ ကြိုးတစ်ချောင်းချိတ်ထားတာကို သူတွေ့လိုက်တယ်။ တအံ့တသြနဲ့ သူမေးကြည့်ပြန်တော့ စားပွဲထိုးက… “အကြံပေးသူတွေက ဇစ်မှာကြိုးချိတ်ထားခြင်းအားဖြင့် ကျွန်တော်တို့ အပေါ့သွားချင်တဲ့အချိန် ဇစ်ကို လက်နဲ့တိုက်ရိုက် ဆွဲဖွင့်စရာမလိုဘဲ ကြိုးဆွဲလိုက်ရုံနဲ့ရအောင် စီစဉ်ထားပေးပါတယ်။ ဒါဟာ သန့်ရှင်းမှုကို ပိုဦးစားပေးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်” “အင်း သိပ်ကောင်းတဲ့ အကြံပဲ” ငွေရှင်းပြီး ကောင်တာက သူလှည့်ထွက်ခါနီးမှာ တစ်ခုခုကို သူသတိရလိုက်တယ်။ ဒီလိုနဲ့ စားပွဲထိုးကို သူပြန်မေးလိုက်တယ်။ “ဒါနဲ့.. အပေါ့သွားပြီး မင်းတို့ရဲ့ ဟိုဒင်းကို လက်မသုံးဘဲ ဘောင်းဘီထဲ ဘယ်လိုပြန်ထည့်သလဲ?” “တခြားလူတော့ မပြောတတ်ဘူး.. ကျွန်တော်ကတော့ ဇွန်းနဲ့ပဲ သုံးလိုက်တယ်”
” ကယ်ကြပါအုံးတော့ ” လို့တစ်ချက်သာကျယ်ကျယ်အော်နိုင်ပြီး ရေကန်ထဲမှာ မြုပ်လိုက်ပေါ်လိုက် ဖြစ်နေတယ်။ မြင်တဲ့သူတွေက ကန်ဘောင်ရိုးပေါ်ကနေ သူ့ထက်ငါအော်ပြီး ……
” ဒေါ်ပြား…. ပေး…ပေး… လက်ပေး..လက်ပေး… ” လို့ပြောကြပြီး ဒေါ်ပြားရှိရာကို ၀ါးလုံးနဲ့ထိုးပြီး ကမ်းပေမဲ့ ဒေါ်ပြားက လက်မပေးဘူး…။ ဒီတော့မှ လူငယ်တစ်ယောက်က ပြေးလာပြီး –
” ဒေါ်ပြားကို ပေး လို့ပြောလို့မရဘူးဗျ… ။ကျွန်တော့ကိုသာ ၀ါးလုံးပေး…. ” လို့ဆိုပြီး..။
” ဒေါ်ပြား.. ယူလိုက်… ယူလိုက်… ၀ါးလုံးလေးကို ယူလိုက်… ရော့ … ရော့… ။ ”
ဒီလိုကျယ်ကျယ်အော်ပြီးတော့ ၀ါးလုံးကိုထိုးပေးလိုက်မှ ဒေါ်ပြားက ၀ါးလုံးကို လှမ်းဆွဲလိုက်သကိုး….။ နို့မို့ဆိုရင် အသေပဲ ..။ ဒေါ်ပြားတို့က အဲလို…အဲလို… မှတ်သားလောက်ပါပေတယ
ကျောင်းတုန်းက ကောင်လေးက ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကို လိုက်ခဲ့ဖူးတယ်…
သူတို့နှစ်ယောက် အသက်(၃၀)လောက်မှာ ရန်ကုန်မြို့တစ်နေရာမှာ ပြန်တွေ့ကြတယ်….
အဲ့ဒီအချိန်မှာ လူပျိုကြီးက ကားနဲ့သွားတယ်….လမ်းမှာ အပျိုကြီးနဲ့တွေ့တော့
ကျောင်းတုန်းက အကြောင်းတွေပြန်ပြောရင်း ရင်တွေခုန်နေကြတာပေါ့…
ဒီလိုနဲ့ပဲ လမ်းတစ်ဝက်လောက်မှာ လူပျိုကြီးက ဂီယာထိုးမလို့ဂီယာတံကိုလှမ်းကိုင်
လိုက်တာ အပျိုကြီးရဲ့ပေါင်ပေါ်ကိုလက်က ရောက်သွားပါလေရော…
အပျိုကြီးလဲ ရှက်ရှက်နဲ့လူပျိုကြီးကို လှမ်းပြောလိုက်တယ်….
ရှင်..ရာဇသတ်ကျမ်းက စာမျက်နှာ -30 ကို သတိရပါ…လို့ပြောလိုက်တော့
အဲ့ဒါနဲ့ပဲ ကုန်တိုက်တစ်ခုလဲ ရောက်ရော အပျိုကြီးက ဆင်းသွားတယ်…
အဲ့ဒီတော့မှ လူပျိုကြီးလဲ ပျာပျာသလဲ ကားဒက်ဘုတ်ပေါ်က ရာဇသတ်ကျမ်းစာအုပ်ကို ကောက်ကိုင်ပြီး စာမျက်နှာ-30 ကို လှန်ဖတ်ပါလေရော…
အမောင် ချစ်သား.. ရှေ့ကိုတိုးလော့…..
……….. ဟား ဟား ဟား ဟား………..
အပေါ်က ဟာသတွေထက် ကိုကြယ်လေး ဟာသတွေက ပိုရယ်ရသလိုပဲဗျ… ဟားဟား
‘‘ ကျွန်…ကျွန်..ကျွန်တော့် အဖေပါ ဆရာကြီး။’’
‘‘ မှန်တယ်၊ ကဲ…နောက်တစ်ယောက်ပြောပါဦး။’’
“ဟေ့လူ၊ ဒီလောက်တောင် ဝမ်းနည်းမနေပါနဲ့။ ကျွန်တော် ကျီစားတာပါဗျ။
နောက်တစ်ခွက်ဖိုးကို ကျွန်တော် ပေးပါ့မယ်ဗျာ”
“ဒါကြောင့် မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော့်အဖြစ်ကို ခင်ဗျားမသိလို့ပါ။ ဒီနေ့ဟာ
“ဓာတ်ပုံကို မင်းတို့ အမှတ်တရ ဝယ်ထားသင့်ကြတယ်။ ကြီးလာတဲ့အခါ ဓာတ်ပုံကို
ကြည့်ပြီး မင်းတို့ အမှတ်တရ ပြောနိုင်ကြမယ်။ ‘ဒါကတော့ မောင်နီပဲ။ အခု
ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီး ဖြစ်နေပြီ’ ၊ ‘ သူကတော့ မခင်သက်၊ တက္ကသိုလ်မှာ ကထိကကြီး
ဖြစ်နေပြီ’ ၊ ‘ သူကတော့ ချောကလျာ၊ အခုတော့ နာမည်ကြီး ရုပ်ရှင် မင်းသမီး’
“အင်း။ အလယ်တည့်တည့် မှာ ရပ်နေတဲ့ ငါတို့ ဆရာမတောင် သေသွားတာ ကြာပါပကော”
စမောစတား (ကြယ်လေး) ရေးတဲ့ ဟာတွေ ရီရတယ်။ ဒီလို တပေါင်းတည်း ရေးတော့ မဆိုးဘူး လိုက်ရှာ မဖတ်ရတော့ဘူးပေါ့။ ကောင်း၏ ကောင်း၏… အားပေးသွားပါတယ် ချင့်….
သူဝယ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကို ဘယ်လိုသယ်ရမှန်းမသိဘူးဖြစ်နေလို့ လေ….
“ခြံအမှတ် ၀၀၇၊ ရေဝတီလမ်းကို သိပါသလားရှင်”
“သိတာပေ့ါ၊ ကျနော့်ခြံဘေးကပ်လျက် ခြံဘဲ”
“ကျနော်လဲ အိမ်ပြန်မှာ ကျနော်နဲ့လိုက်ခဲ့လေ၊ ဒါပေမဲ့
“လွယ်လွယ်လေး၊ အိမ်သုတ်ဆေးပုံးကို တောင်းထဲ ထဲ့လိုက်ပြီး ခေါင်းနဲ့ရွက်လိုက်၊
ကြက်တကောင်စီကို လက်မောင်းမှာ ချိပ်လိုက်၊ ဘဲ၂ ကောင်ဆီကိုိ
အဲလိုနဲ့ အတူတူလျှောက်လာကြရင်း လမ်းခုလပ် လူပြတ်တဲ့နေရာရောက်တော့ အဲဒီမိန်းမက
“ရှင်..ရှင်…ကျမကို လူပြတ်တဲ့လမ်းကနေ ခေါ်လာပြီး ဗလက္ကာရကျင့်မလို့ မလား”
“ဗျာ…ကျနော့် ခေါင်းပေါ်မှာ ဆေးပုံးကြီးနဲ့တောင်းကိုရွက်ထားတယ်……
လက်မောင်းမှာလဲ ကြက်တွေချိပ်ထားတယ်၊ လက်နှစ်ဖက်မှာလဲ ဘဲတွေ
ဆွဲထားရတယ်၊ ဒီလိုလူက ခင်ဗျားလေးကို ဘယ်လိုလုပ် ဗလက္ကာရကျင့်လို့ရမလဲဗျာ…”
ဒီတော့ အားနွဲတဲ့ မိန်းကလေးက ဘာပြန်ပြောတယ်ထင်လဲ… ….
“ဘဲတွေကို အောက်ချ လိုက်ပြီး ထွက်မပြေးနိုင်အောင် တောင်းနဲ့ အုပ်လိုက်၊
ဆေးပုံးကို တောင်းအပေါ်ကဖိထားလိုက်၊ ကြက်နှစ်ကောင်ကိုတော့ ကျမ
အင်္ဂလိပ်ဘုန်းကြီး ဖားသားဂျွန်သေ၍ စိန့် ပီတာ တံခါးကိုရောက်တော. သူ့အရှေတွင် လူတစ်ယောက်ရှိနေသည်။ စိန့် ပီတာက ထိုလူကို “မင်းနာမည်နဲ့ အသက်ရျင်တုန်းကလုပ်ခဲ့ တဲ့အလုပ်ပြောပါဓ လို့ မေးပါတယ်။ ထိုသူက “ကျွန်တော် အငှားကားမောင်းပါတယ်။ ကျွန်တော်
နာမည် ဂျိုးပါ” လို့ ပြောပါတယ်။ စိန့် ပီတာက ပိုးအင်္ကျီနဲ့ ရွှေနန်းတော်မှာနေဖို့နေရာပေးပါတယ်။
ဘုန်းကြီးဖားသားဂျွန်အလှည်ရောက်တော့ ဖားသားဂျွန်က “ကျွန်တော် ၆၂ နှစ်လုံးလုံး
ဘုရားအတွက်လူတွေကိုတရားဟောပါတယ်” လို့ ဆိုပါတယ်။ စိန့် ပီတာက ချည်သားအင်္ကျီပေး
ပြီး သစ်သားအိမ်မှာနေဖို့နေရာချပေပါတယ်။
ဖားသားဂျွန်က “ဘယ့်နှယ်ကြောင့် အငှားကားမောင်းတဲ့ လူက ကျွန်တော့ ထက်သာတဲ့ နေရာကိုရတာလဲ” လို့မေးပါတယ်။
စိန့် ပီတာက “ငါတို့ က အကျိုးသက်ရောက်မှုနဲ့ ပဲတိုင်တာတယ်။ မင်းတရာဟောတဲ့အချိန်အားလုံးအိပ်နေပြီး ဂျိုး ကားမောင်းတဲ့ အချိန် လူတိုင်းဘုရားစာရွတ်တယ်” လို့ ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။
မိန်းကလေး …. ဟလို ကျွန်မ +++ လမ်းထိပ်မှာပါ။ တက္ကစီတစ်စီး လွတ်ပေးလို့ရမလား?
တက္ကစီသမား …. ဟုတ်ကဲ့.. ခင်ဗျား ဘာအဝတ်အစား ဝတ်ထားသလဲ?
မိန်းကလေး … အဖြူရောင်အင်္ကျီနဲ့ အပြာရောင်စကပ်ပါ
တက္ကစီသမား … ဘယ်အထိလဲ? (ဘယ်အထိ ပို့ရမလဲ?)
ဆရာဝန်က ညည အိပ်မပျော်တဲ့ မောင်မောင်ကို တစ်ကနေ တစ်ထောင်အထိရေပြီး
အိပ်ကြည့်ပါလို့ အကြံပေးတယ်။ နောက်တစ်ရက်မှာ မျက်ကွင်းညိုကြီးနဲ့ ဆေးခန်းကို
မောင်မောင်… ညက ကျွန်တော် ၇၅ဝအထိပဲရေပြီး ဆက်မရေနိုင်တော့လို့ ကော်ဖီတစ်ခွက်
ထသောက်ပြီး တစ်ထောင်အထိ ရေလိုက်တယ်။
ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဟာသ၀တ္ထုတိုများ (ကံချွန်)
ဒီမှာ ဒေါင်း နိုင်ပါတယ်
“ရှင်တို့ရုံးက ယောက်ျားတွေ မှန်သမျှ နှစ်ရက်လုံးလုံး
ကျွန်မဘက်ပဲ လှမ်းကြည့်နေကြတယ်ရှင့် ”
“တိုင်ကပ်နာရီချိတ်ထားတဲ့ အောက်က စားပွဲဆီ
ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် မိုရီ သည်
အမေရိကန်သို့ ချစ်ကြည် ရေး ခရီးထွက် မည် ဖြစ်သည်။
ခရီးမထွက် ခင် တွင်
အတူ လိုက် ပါမည့် ဘာသာပြန် သူမှ
“ဝန်ကြီးချုပ်ခင် ဗျား သမ္မတ နဲ့ တွေ့တဲ့ အခါ မှာ လက်ဆွဲ နှတ်ဆက်ပြီး ၊
လို့ နှတ်ဆက်ပါ၊ အဲဒီ့ အခါမှာ သမ္မ တ က
I am fine, and you.
လို့ ပြန်မေးပါလိမ့်မယ်၊ အဲဒါပြီးရင် ဝန်ကြီးချုပ် က
me too လို့
ကလင်တန်။ ။ (ရုတ်တရတ် ကြောင်သွားသော်လည်း ဟာသပြောသည်မှတ်၍ ပြန်လည်
ဟာသနှောလိုက်သည်) Well, I am Hilary’ husband, and you?har har.
“ ခင်ဗျားဟာ အလွန်အလိုက်ကန်းဆိုး မသိတဲ့လူပဲ . . ကျွန်တော့်ဇနီး
ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီလို့ ကျွန်တော်က ပြောတယ် . . . ဘယ်သူ့ ဗိုက်လဲလို့
ခင်ဗျားက မေးတယ် . . ”
“ တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာ . . ကျွန်တော်က ခင်ဗျားသိတယ်ထင်လို့  ပါ”
မယုံမရှိကြနဲ့ ။ ဆေးကျောင်းသားဆိုတဲ့ သူတွေဟာ အင်မတန့် ကို
ရင်ခွဲရုံမှာ ပထမဦးဆုံး လက်တွေ့ ဆင်းရတဲ့ နေ့ တစ်နေ့ ပေါ့။
ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေ အားလုံးကလည်း ခွဲရ စိတ်ရတော့မယ်ဆိုတော့ တအားကိုပဲ
ရှေ့မှာလည်း ခွဲစိတ်ခံမယ့် အလောင်းကောင်ကြီးက မလှုပ်မယှက်… ငြိမ်သက်လို
အားလုံးလိုက်လုပ်ရမယ့် လက်တွေ့ သင်ခန်းစာ မစခင်မှာ ပရော်ဖက်ဆာက
ကျောင်းသား အားလုံး သိရမယ့် အချက်နှစ်ချက်ကို အသေးစိတ်ရှင်းပြပါတယ်။
ကျောင်းသာတွေရဲ့ အာရုံ စူးစိုက်မှုရအောင် တစ်ချက် ဝေ့ ကြည့်လိုက်ပြီးမှ
့လက်ကို မသာကောင်ကြီးရဲ့ စအိုထဲကို ကောက်ကာငင်ကာ နှိုက်ထည့်လိုက်ပြီး… သူ
ကြည့်နေကြတဲ့ သူတွေအားလုံး လန့် ဖြန့် ကုန်တော့တာပေါ့။ ကျောင်းသားတွေ ဆီက
‘ဆရာဝန်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင’် ဆိုတဲ့ စကားဟာ အတော့်ကိုပဲ ‘တာ’ သွားပါတယ်။
ဒီအတိုင်း ကျောင်းသားရော ကျောင်းသူပါမကျန် တလှည့်စီ လိုက်လုပ်ကြပါတော့တယ်။
ထည့်ပြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာလိုက်ကြည့်ရသလောက်… ဒီအချက်ကို…
အွန်လိုင်းသမား နဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်
တစ်ခါက ရပ်ကွက်တစ်ခုမှာ မောင်ဘ ဆိုတဲ့လူငယ်လေးတစ်ယောက်ရှိသတဲ့
သူကအင်တာနက်ကို နေ့ ရော ညပါသုံးတယ်တဲ့။သူ့ အချိန်တွေကများသောအားဖြင့်အင်တာနက်သုံးရင်း
နဲ့ ကုန်လွန်နေတာများတယ်။တစ်နေ့ သူ့ လမ်းထိပ်က လက်ဘက်ရည်ဆိုင်ကိုသွားထိုင်တော့
သူနဲ့ တစ်လမ်းတည်းသား သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ သွားဆုံတယ်။နောက်ထွေရာလေးပါးပြောရင်း
မောင်ဘသူငယ်ချင်းနဲ့ အွန်လိုင်းသုံးတာကောင်းတယ် မကောင်းဘူးငြင်းကြတာပေါ့။မောင်ဘကပြောတယ်
” ဟေ့ကောင်အွန်လိုင်းသုံးတော့ နိုင်ငံစုံကသတင်းတွေ သိရတယ် အဲ့ဒါမင်းသိလား ဟိုနိုင်ငံမှာ ရေကြီးတာ
မင်းသိလား ဟိုနိုင်ငံ ငလျင်လှုပ်တာမင်းသိလား ”
” ဟင့်အင်း မသိဘူးကွ” မောင်ဘ က အထင်သေးတဲ့အကြည့်ဖြင့်ကြည့်ပြီးပြောတယ်
“အေး အဲံ့ဒါပဲ မင်းကအင်တာနက်မှမသုံးတာ ဘယ်သိမလဲ ”
မောင်ဘ သူငယ်ချင်းက ဒီလိုပြောလိုက်တယ်
” အေးကွာ နိုင်ငံတကာ သတင်းတွေတော့ ငါမသိပါဘူး ဒါပေမယ့် ငါသိတဲ့သတင်းတစ်ခုကတော့
အင်တာနက်မှာ ပါမှာမဟုတ်ဘူး နှစ်လမ်းကျော်က မင်းရည်းစားလေ မနေ့ ကပဲ လင်နောက်လိုက်
ပြေးသွားပြီ ” တဲ့လေ။
PS : ရီရအောင် ဟာသတင်ပေးတာ ဖတ်ပြီး စိတ် ပူ မနေကြနဲ့နော်းP
သေခြာအောင် Ph လေးတော့ဆက်ကြည့်လိုက်နော်
ကျွန်တော့်ရဲ့ ကွန်ပြူတာ Program တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဆရာ့ထံသို့ တင်ပြ အကြံဥာဏ်တောင်းလိုပါတယ် ..
ကျွန်တော့်မှာ Girlfriend 1.0 ဆိုတာ ရှိခဲ့ပါတယ် .. မနှစ်က အဲ့ဒိ Girlfriend 1.0 ဆိုတဲ့ program ကို wife 1.0 အဖြစ် Upgrade လုပ်ခဲ့ပါတယ် .. ဒီမှာတင် မမျှော်လင့်ပဲ Child Processing ဖြစ်ခဲ့ပြီး Space တော်တော်များများနဲ့ အခြားသော Valuable Resources တွေကို ယူသုံးသွားခဲ့ပါတယ် .. အဲဒီလို ရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်နိုင်တယ် ဆိုတာ သူရဲ့ Product Brochure မှာရော .. Read me Document မှာပါ ထည့်သွင်းဖော်ပြထားခြင်း မတွေ့ခဲ့ရပါဘူး .. အဲဒီအပြင် wife 1.0 က အခြား Program တွေ ကို ထပ်မံရေးဆွဲတပ်ဆင်ပြီး နဂို မူလ System ထဲ ရှိပြီးသား Activities တွေကို ထိန်းကွပ်တော့တာပါပဲ .. ဥပမာ အားဖြင့် Karaok Night 10.3 နဲ့ Beer Bash 2.5 ကဲ့သို့သော Program တွေ ဟာ လုံးဝ အလုပ်မလုပ်တော့ပဲ ရပ်ဆိုင်းသွားပါတော့တယ် .. Wife 1.0 ရဲ့ စွမ်းဆောင်ချက်တွေပါပဲ .. Wife 1.0 ကို System ထဲက နေ Delete လုပ်ကြည့်ပေမယ့် မရတော့ပါဘူး .. ကျွန်တော်က Girlfriend 1.0 ကို ပြန်သွားရင် ကောင်းမလား ဆိုပြီး Uninstall လုပ်ကြည့်ပါတယ် .. ဒါပေမယ့် Uninstall က လုံးဝ အလုပ်မလုပ်ပါဘူး .. ဒါကြောင့် ဒီပြဿနာ ကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲ ဆိုတာ ဆရာ ဖြေကြားပေးပါခင်ဗျား ..
ဦးဝါသနာရှင် ခင်ဗျား ..
လူကြီးမင်း ကြုံတွေ့နေရသောပြဿနာသည် အလွန်ယေဘူယျကျပြီး .. လူတော်တော်များများဧ။် မကျေမနပ် ပြောဆိုသံများနှင့် တထပ်တည်း ဖြစ်သည် .. လူအများစုက wife 1.0 သည် Utilities & Entertainment Program တခုလို့ ထင်ကြပြီး .. Girlfriend 1.0 မှ Wife 1.0 သို့ Upgrade လုပ်ကြတာပါပဲ ..
အမှန်တော့ Wife 1.0 ဟာ Utilities & Entertainment Program မဟုတ်ပဲ Operating System တခု ဖြစ်ပါတယ် .. Wife 1.0 ကို ဖန်တီးသူက အရာတော်တော်များ လုပ်ဆောင်နိုင်အောင် ဆိုပြီး သေချာပုံစံပြုထုတ်လုပ်ခဲ့တာပါ .. အဲဒိ့ Program ကို System ထဲမှာ Install လုပ်ပြီးတာနဲ့ Uninstall , Delete (or) Purge လုပ်လို့ မရပါဘူး .. Girlfriend 1.0 ကိုလည်း ပြန်သွားလို့ မရပါဘူး .. ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ သူကို Design လုပ်စဉ်ကတည်းက Girlfriend 1.0 ကို ပြန်သွားလို့ မရအောင် စီမံထားလို့ ပါပဲ ..
တချို့က Girlfriend 2.0 တို့ Wife 2.0 ဆိုတာတွေကို System ထဲမှာ ကြိုးစားပြီး Install လုပ်ကြပါတယ် .. ဒါပေမယ့် အဆင်ပြေမှု မရှိပဲ မူလထက် ရှုပ်ထွေးမှုများနဲ့ အဆုံးသတ်ကြတာကို တွေ့ရပါတယ် .. ကျွန်တော် အကြံပြုချင်တာက Wife 1.0 ကိုပဲ ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းပြီး သုံးစွဲပါ .. ဖြစ်လာတဲ့ အခြေအနေ အရပ်ရပ်ကို သတိ၊ဥာဏ်ပညာ နဲ့ ယှဉ်ပြီး ရင်ဆိုင်ပါ .. ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင် wife 1.0 ကို Install လုပ်ထားသူတယောက်အနေနဲ့ အကြံပြုချင်တာ နောက်တချက်ကတော့ Wife 1.0 တခုလုံးနဲ့ သူ့ရဲ့ General Protection Faults (GPFs) တွေကို သေချာလေ့လာပါ .. ဖတ်ကြည့်ပါ .. ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ပြဿနာနဲ့ အမှားတွေအတွက် မိမိအပေါ်ကျရောက်လာမယ့် သက်ရောက်မှုတွေကို ကြိုတင်ပြီး ခန့်မှန်းထားကြည့်ပါ..
အကယ်၍ အဲ့ဒိ Program ဟာ ဘာမှ ဆက်လုပ်လို့ မရလောက်အောင် ကြုံတွေ့နေရပြီ ဆိုရင် တော့ Apologies ဆိုတဲ့ ခလုပ်ကို အရင် နှိပ်ပါ .. ပြီးရင် Reset ဆိုတဲ့ ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ .. အားလုံး အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ် .. GPFs တွေ အားလုံးရဲ့ ပြစ်ချက်တွေ ဟာ မိမိကြောင့်ပါလို့ တာဝန်ယူထားသမျှ System ကြီးတခုလုံးဟာ ချောမွေ့စွာ အလုပ်လုပ်နေပါလိမ့်မယ် ..
တကယ်တော့ Wife 1.0 ဆိုတာ ဟာ အင်မတန်ကောင်းမွန်တဲ့ Program ကြီးပါ .. ဒါပေမယ့် အင်မတန် အဆင့်မြင့်မား တဲ့ ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းမှု လိုအပ်တာတော့ အမှန်ပါ ..
ဟားဟား… တော်တော် စုဆောင်းတတ်တဲ့ ကိုကြယ်လေးပဲ… ကောင်းတယ်ဗျာ… အစ်ကို့ ဟာသာလေးတွေက
ဟီး နဲ နဲ ရှိသေးတယ်
အမ ညီမတွေ အားနာလို့
သိပ် အကြမ်းကြီး တော့မဟုတ်ပါဘူး
အပေါ်က ဟာသ ဆိုတာကို မန်း မလို့ဝင်လာလိုက်တာ၊ကြယ်လေး ဟာသတွေနဲ့တိုးပြီး၊ဘာမန်းရမှန်း မသိဘူးဖြစ်သွားတယ်။
ဟွန်းနော်…သူတို့ ဟာသက ပိုရီနေရတယ်……:)
ကိုကြယ်လေးက နောက်မှပေါက်တဲ.ရှူး အဲအဲ ရွှေကြာပင်ပါ….